UltraSMSScript: Zụrụ SMS, MMS zuru ezu, na Voice Marketing Platform Na API | Martech Zone
Fraịdee, June 4, 2021 Fraịdee, June 4, 2021 Douglas Karr
Ịmalite usoro ozi ederede nwere ike bụrụ usoro mmejupụta na -akụda mmụọ. Kwere ma ọ bụ na ị kwenyeghị, ndị na -ebu ya bụ akwụkwọ ntuziaka ọbụladị taa ... nyefee akwụkwọ, mee nyocha data njigide gị na iwu nzuzo, banye na ikikere SMS. Anaghị m agbalị ịkọwa mkpa ọ dị irube isi na usoro a, mana nkụda mmụọ nke ịkwaga ma ọ bụ ijikọ azịza SMS nwere ike bụrụ ihe na-akụda mmụọ maka onye na-ere ahịa ziri ezi.
Usoro maka ire ahịa SMS bụ ihe dị mgbagwoju anya. Imirikiti nyiwe SMS, dịka ọmụmaatụ, na-eme ọ bụghị kpọtụrụ ma jikọta ndị na -ebu SMS ozugbo. A na -enwekarị ahịa SMS ma ọ bụ ikpo okwu nke na -ekwurịta okwu na ọrụ nke na -ejikọ na ọnụ ụzọ ozi wee ziga onye ozi ahụ ozi ahụ.
Ọ bụ ezie na ikpo okwu SMS nwere ike ịdị ịtụnanya, ha na-adabere na ọnụ ụzọ ozi SMS maka usoro ha ga-arụ ọrụ. Site na ọnụahịa ọnụahịa, nke ahụ pụtara na ị kwụrụ ụgwọ maka ngwanrọ gị, ị kwụrụ ụgwọ maka ụgwọ izi ozi gaa na ikpo okwu gị, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka ịnweta mkpụrụ okwu ndị ọzọ, ha wee kwụọ ụgwọ maka ụgwọ izi ozi n'ọnụ ụzọ ozi. Ọnụ nke SMS nwere ike ịgbawa ngwa ngwa… ọkachasị ebe ndị ahịa na-anabata SMS karia ka ha na azụmaahịa na-emekọrịta ihe.
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ gara aga, ndị ahịa nde 48.7 ga-eji obi ha niile họrọ ịbanye iji nweta nkwukọrịta SMS sitere na ụdị ọkacha mmasị ha. 70% nke ndị na-azụ ahịa na-eche ahịa SMS bụ ụzọ dị mma maka azụmaahịa iji dọbara uche ha. 82% nke ndị mmadụ na-ekwu na ha meghere ozi ederede ọ bụla ha natara.
Pope Lauren, 45 SMS Statistics Statistics Ndị Ahịa Gị Chọrọ Kmara
Onwere uzo uzo SMS di ike ma di onu ahia n’ebe ahu igha edebanye aha ma jiri aka ya tinye oru site na API siri ike, tinyere Twilio, Plivo, Telnyx, SignalWire, Nexmo, Ytel na Bandwit. Ikpokoro ndị a nwere ngwa onye nrụpụta ngwanrọ na -ejikọ na API siri ike iji nyere gị aka ịzụlite SMS ma ọ bụ mwekota gị otu ọ masịrị gị. Agbanyeghị, ọ bụ ihe nwute, nke ahụ chọrọ nka mmepe, akụrụngwa na mmezi na -aga n'ihu.
UltraSMSScript: Zụrụ ma hazie Platform Gị SMSzi ozi SMS
Nhọrọ ọzọ dị ọnụ ala n'ịzụlite ikpo okwu ozi SMS nke gị ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ikikere kwa ọnwa na nyiwe ịntanetị bụ ịzụta koodu ahụ wee rụọ ya na akụrụngwa nke gị. Nke a nwere ike inyere gị aka ibili na ịgba ọsọ ọsọ yana hụ na ikpo okwu gị na -erube isi, dị nchebe ma kwụsie ike. UltraSMSScript bụ sọftụwia akara ọcha nwere API ị nwere ike zụta ma wụnye onwe gị wee jiri ụzọ SMS ọ bụla maka. Enweghị ụgwọ na -aga n'ihu, ị na -akwụkwa ụgwọ ozi SMS dị ọnụ ala karịa ebe ị na -eji ọnụ ụzọ ámá arụ ọrụ.
UltraSMSScript Atụmatụ Gụnye
Kupọns ekwentị - Mepụta Kupọns Mobile mara mma iji zigara ndị ahịa gị. Ha bụ ụzọ dị mma iji wulite ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe ma na-akwụghachi ndị ahịa gị ugbu a ụgwọ. Kupọn ọ bụla nwere ike ịhazi ya nke ọma ma gụnye ọtụtụ ntọala na atụmatụ na-enye gị ohere mgbanwe na otu ịchọrọ ịtọ ha.
Baa na Akwentị Bots - Mepụta akpaghị aka SMS ajụjụ na azịza nke na-gbapụ site na ide ozi ederede na isiokwu. Nwere ike ịmepụta dị ka ọtụtụ ajụjụ na a usoro dị ka ị chọrọ. Ọ dị mma maka nkwado ndị ahịa, nyocha, nchịkọta nzaghachi bara uru, yana ịdepụta listi gị.
Zipu SMS - Na obi nke mkpọsa ahịa ahịa SMS bụ ikike izipu ozi SMS n'ọtụtụ na ndị debanyere aha gị. Zigara otu 1 ma ọ bụ ọtụtụ otu otu oge! Zipu ozi nye ndi ahia gi ikwuputa amamịghe ma obu ego ichoro ikwalite nke gha eweta oke ahia.
Keywords mkpanaka akparaghị ókè - Ikike nke ndị ọrụ itinye aka na ahịa isiokwu. Keywords ekwentị bụ mmewere nke mkpọsa ahịa mkpanaka iji rịọ maka otu ahịa ahịa. Get nweta ohere isiokwu na-akparaghị ókè! Ndị mmadụ nwere ike ịdebanye aha maka ahịa ederede gị site na ịde ederede na isiokwu.
Nnukwu usoro ihe omume SMS - chedhazi ozi n’etiti oge bụ nnukwu ụzọ iji hụ na ndị ahịa gị agaghị echefu gị. Ederede anyị na-enye gị ohere ịnweta njikwa oge mgbe ezigara ozi SMS ka ị nwee ike ịhazi ozi ọnwa tupu oge eruo.
Ndị na-ede akwụkwọ - Mgbe mmadụ sonyeere ndepụta ndị debanyere aha gị, zighachiri ha ozi omenala ozugbo. I nwekwara ike melite autoresponders na-akpaghị aka na-eziga SMS azụ ndị debanyere aha mgbe ha denye aha na a preset oge dị ka email autoresponders ọrụ.
Zipu Izi ozi MMS / Foto - MMS na-eweta ozi kachasị mma na ngwa ngwa nke SMS na nkwukọrịta ndị ahịa gị. Tinye foto a dum na igwe ọgaranya na ekwentị ọ bụla, yana ọnụego 100% mepere emepe na oge nzaghachi ngwa ngwa.
2-Way SMS Nkata - Mkparịta ụka 2-ụzọ SMS na-ejikọ gị ma ọ bụ ngalaba ọrụ ndị ahịa gị na ndị ahịa mkpanaka gị, site na SMS. Chịkọta nzaghachi bara uru ma mee ka gị na ndị ahịa gị nwee nkwukọrịta n'okporo ụzọ 2, ha niile site na SMS site na iji ozi ozigbo!
Sub-Akaụntụ - Ndi otu ndi otu ichoro inyefe oru na modulu di iche n’ime n’elu ikpo okwu ma nye ha ohere ibanye na ihe di iche? Nwere ike ime nke ahụ site na obere akaụntụ anyị!
Ntughari ozi - Ọ dị mkpa ịtọọ usoro ozi na ugboro ugboro? Can nwere ike ikwugharị ihe omume kwa ụbọchị, kwa izu, kwa ọnwa, na kwa afọ na ugboro ole a haziri ahazi (kwa ụbọchị, ụbọchị abụọ ọ bụla, ụbọchị 2 ọ bụla, otu ugboro n'izu, kwa izu abụọ, wdg…)
Asọmpi SMS - Mepụta asọmpi SMS dị ka ụzọ iji soro ma kwụghachi ndị ahịa gị ugbu a ụgwọ ma jiri ya dị ka nnukwu ngwaọrụ iji bulie ndepụta gị. Onweghi ihe dị mkpa karịa idebe ndị ahịa gị obi ụtọ ma bulie ndepụta gị n'otu oge!
Daybọchị ọmụmụ SMS chọrọ - Mfe anakọta kọntaktị gị 'ụbọchị ọmụmụ mgbe ha denye aha na ndepụta gị. Mgbe ahụ, na ụbọchị ọmụmụ ha ma ọ bụ ọbụna ụfọdụ ụbọchị ole na ole gara aga, usoro anyị ga-ezigara ha ozi ederede ụbọchị ọmụmụ gị na-akpaghị aka.
Njikọ Facebook - Ikike ịkekọrịta ozi gị na ibe Facebook gị! Gbasaa okwu ahụ ma bawanye nsonye n'etiti ndị Fans gị na-enye gị ikike ịmalite ndị debanyere aha gị site na ịkekọrịta ozi gị na akaụntụ Facebook gị.
Nnukwu ederede nzipu SMS - Lelee stats zuru ezu dị ka # nke ozi ọma, # nke ozi dara, ihe kpatara ozi ahụ dara, ma nye onye ọrụ ohere ihichapụ ndị ọ bụla debanyere aha na ndepụta ahụ enwetaghị ozi.
Nchịkọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi zuru ezu - Sochie mkpọsa gị ka ị jiri nlezianya lee anya na isiokwu ndị na-arụ ọrụ kachasị mma, ederede SMS, na ndị debanyere aha na ndị na-edebanye aha na oge ụfọdụ.
Widgets weebụsaịtị - Kwe ka ndị ahịa nwee ike isonye na ndepụta azụmaahịa SMS site na mpempe akwụkwọ weebụ nke etinyebere na weebụsaịtị. Nke a na-enye ụzọ ọzọ dị ọnụ ahịa dị ọnụ ahịa iji rute ma dọta ndị ahịa ọhụrụ.
Ntuli aka SMS - Mepụta ntuli aka ntuli aka iji mee ka ndị debanyere aha gị tinye aka ma nwee mmasị na ihe ị ga-enye yana ịnakọta ozi bara uru ma nweta nghọta banyere ihe ha chọrọ na mkpa ha n'aka gị.
Onye na-ewu mgbidi ihu igwe - Zuru oke maka ndị ọrụ chọrọ ịmepụta ibe ha na vidiyo, onyonyo ma ọ bụ HTML ọ bụla wee zipụ ibe URLs ahụ na ndepụta ndị debanyere aha ha iji lelee. Onwe ya na ederede HTML.
Ihe ncheta - dutọ oge ma zipu ihe ncheta ndị na-echetara gị ndị ahịa gị na ị ga-ahụ na ha agaghị echefu ihe ha hụrụ. Chọọ kọntaktị gị wee dezie oge iji gaa SMS.
Wuru-Na njikọ Shortening & Ndepụta - have nwere nhọrọ iji belata njikọ gị ka ha wee ghara iwepụta ọtụtụ mkpụrụedemede na ozi ederede gị yana soro ọtụtụ clicks emere maka njikọ enyere iji hụ etu ozi gị si dị irè. Ngwaọrụ dị oke aka!
Nọmba Nọmba - Chịkọta nzaghachi bara uru ma mee nkwukọrịta n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ abụọ sitere na nọmba ekwentị nwere ike ịmata! Tinye ọtụtụ nọmba mpaghara na akaụntụ onye ọrụ. Ziga ozi site na ọdọ mmiri nọmba ekwentị iji mee ngwa ngwa ngwa ma ọ bụ belata ya.
Ntanetị email - Get a ọhụrụ subscriber email alerts dị ka ha na-eme ma ọ bụ na a kwa ụbọchị nchịkọta. Ọzọkwa, nweta ọkwa mkpuchi kredit dị ala nke na ị ga-ama mgbe ị ga-emeju akara gị.
Ozi ndebiri - Zọpụta nkịtị ma ọ bụ mgbe eji SMS ozi nke mere na ị ga-enweghị re-tinye otu ozi ugboro ugboro. Naanị họrọ ụdị template ị ga-eji ma mee ka ozi jupụta gị.
Mgbasa Ozi Site na Ekwentị - Na-agba ọsọ? Nsogbu adighi ma oli! Ga-enwe ike gbajie ozi mgbasa ozi SMS gị site na iji ozi ederede dị mfe! Enweghị mkpa ịbanye na akaụntụ gị iji jikwaa usoro a.
Koodu QR - N'ịwapụta koodu QR dị ka ụzọ iji jikọta mgbasa ozi ị na-anọghị n'ịntanetị na ntanetị. Sọftụwia anyị bịara na ndebanye aha ọhụrụ na ibe weebụ URL QR Koodu.
Agba nke Ndi ana-akpo gi - Site na ọrụ nkewa nke otu anyị, ị nwere ike ịmepụta otu dị iche iche na ndepụta aha ahịa ederede gị. Nke a na - ahazi kọntaktị gị gaa na otu ma na - enye gị ohere idozi ndị debanyere aha gị niile na ebe ha si abịa!
Olu Mgbasa Ozi - Gbanwee ozi olu gị na kọntaktị gị! Ma pịnye na ozi na usoro ga-agbanwe ederede ka ọ bụrụ olu, ma ọ bụ bulite ozi nke gị site na faịlụ MP3. Greatzọ ọzọ dị mma iji kparịta ụka ma debe ndị kọntaktị gị na onyinye gị.
Bulite gị Subscriber Nsuso - Nwere ndepụta-na-ndepụta SMS si ebe ọzọ na ị chọrọ ịkwaga n'elu? Ọ bụrụhaala na ị nwere nkwenye doro anya edere n'aka ndị debanyere aha ha na ha kwetara ịnata ozi n'aka gị, ịnwere ike bulite ndepụta gị. Anyị emeela usoro ahụ n'ụzọ dị mfe!
Ozi ozio / Mbugharị oku - Ozi olu na ịkpọ oku ikike. Nwee nhọrọ iji kpọọ oku gị ozugbo na ozi olu, ebe ị nwere ike ige ha ntị na nchịkwa ahụ, ma ọ bụ tinye oku gị na nọmba ọ bụla ịchọrọ!
SMS ka Email / Email na SMS - Nweta ozi email mgbe mmadụ na-ede ihe na nọmba ntanetị gị (SMS ka Email). Nwere ike ịzaghachi ozi ahụ ozugbo na onye ahịa email gị, sistemụ ahụ ga-ewe email ahụ, ma degharịa ha ozi (Email to SMS). Ngwaọrụ dị oke mkpa ma baa uru nke ukwuu!
Aha na Email Capture - Nwere nhọrọ iji kpokọta aha na email site na onye debanyere aha ọhụrụ na-esonye na ndepụta opt-in gị! Anakọta aha hazie gị SMS ozi na ozi ịntanetị ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji na-akwalite ha na gị email ahịa mkpọsa.
Njikwa kọntaktị - Dị mfe iji sistemụ njikwa kọntaktị nke nwere kọntaktị gị / ndị debanyere aha. Chọọ ma jikwaa ndị debanyere aha gị ebe a.
SMS Punch Kaadị Ikwesị ntụkwasị obi wardsgwọ Ọrụ - Chefuo kaadị ndị ahụ eji agba akwụkwọ na mgbe na-ezighi ezi. Nye SMS "punch kaadị" iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa gị ma wulite iguzosi ike n'ihe nye akara gị iji mee ka ndị ahịa nwee obi ụtọ ma laghachi.
Onye na-ewu ụlọ Kiosk - Kiosk na-eguzosi ike n'ihe dijitalụ bụ ngwa na-egbusi ihe nke na-enye gị ohere ịmepụta ngosipụta kiosk dị mfe iji. Ọ na-enye ndị ahịa gị saịtị gosipụtara ngosipụta enyi na enyi - na-ahapụ ha ka ha sonyere na klọb mkpanaka, lelee mmemme iguzosi ike n'ihe, wee lelee ọnọdụ ha ugbu a.
API - Nweta ọtụtụ isi atụmatụ nke UltraSMSScript ikpo okwu site na API. Ijikọta UltraSMSScript API n'ime ngwa gị ga - enyere gị aka ịgbatị arụmọrụ nke ikpo okwu n'ime ngwa nke aka gị!
Njikọ Email - Ọ bụrụ na agbanyere ijide email, tinye ozi ịntanetị na-akpaghị aka na ọrụ email kachasị amasị gị dị ka Mailchimp, aWeber, GetResponse, ActiveCampaign, ma ọ bụ Sendinblue! All edozi seamlessly n'azụ Mpaghara.
Faksị N'ịntanetị - Zipu ma nata faksị n’etiti UltraSMSScript na igwe fax! Bugharịa akwụkwọ ntuziaka ahụ, usoro na-anọghị n'ịntanetị nke faksị ma gbanwee akwụkwọ faksị n'ime ahụmịhe ngwanrọ ma na-enye ndị azụmaahịa mgbanwe karịa na ịhapụ ihe ochie ochie.
Ntinye aka ugboro abụọ - Nhọrọ nke okpukpu abụọ nwere ike ma ọ bụrụ na agbanwuru, ndị mmadụ ga-enweta ozi ederede ọzọ na-arịọ ha ka ha zaghachi "Y" iji gosi na ndenye aha ha. Ntinye ọpụpụ ugboro abụọ abụghị iwu, agbanyeghị, ọ na-atụ aro ya nke ukwuu n'ọnọdụ ụfọdụ dabere na ọdịnaya nke ozi ị ga-eziga.
Maka ụdị nke koodu Ederede PHP, ị ga-enweta koodu isi niile iji nye gị ohere igbanwe ihe eji eme n'ihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnye ya ụdị anya na ịchọrọ. Agbanyeghị, a ga-etinye ọtụtụ n’ime isi faịlụ isi ndabere. UltraSMSScript ojiji ioncube ka encode na ikike faịlụ. Imirikiti ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ nwereworị ioncube Loader arụnyere ma nyeere ebe ọ bụ na ioncube bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka ichebe faịlụ ndị nwere mmetụta ọsọ ọsọ. Maka ngwugwu Level 4 & ULTRA nke edemede ahụ, ị ​​ga-enweta 100% nke koodu isi yana, n'ezie, ị banye aka na nkwekọrịta na-agaghị ere ere nke na-ekwu na ị gaghị eweghachite edemede ahụ n'ezie.
Zụta UltraSMSScript Ugbu a!
Tags: AWebernnukwu SMSna-ebugharị okuemail na smsGetResponsenjikọ shorteningnọmba sms dị na mpagharamailchimpMMSfaksị dị n'ịntanetịPHP akwukwọ-Koodu QRSendinBluesms nyochaSMS autoresponderSMS botsms nkatasms kọntaktịsms Kupọnssms isiokwusms nkịtasms iguzosi ike n'ihesms ntuli akasms nkewaSMS ka emailNgwaọrụ smsmgbasa ozi oluolu oluikpo okwu ahịa oluozi olu
Ihe 5 Needkwesiri ịtụle tupu ịmalite weebụsaịtị Weebụ Ecommerce gị